जटिल सरल वाक्य - यो के हो? यस प्रश्नको एक व्यापक जवाफ वर्तमान लेखमा दिइनेछ। साथै, हामी तपाईंलाई एउटा सरल वाक्य द्वारा जटिल हुन सक्छ के भन्नेछु, र के विराम नियम दिइएको मामला मा लागू हुन्छ।
जटिल सरल प्रस्ताव - एक प्रस्ताव, कुनै पनि विन्यास समावेश गर्नेछ जो। र यो एक व्याकरण आधार हुनु हुँदैन।
यो सरल आवेदन जटिल कि संरचना बीच एक भद्र, उत्पन्न उल्लेख गर्नुपर्छ परिचयात्मक शब्द, थपिएको, परिस्थिति र यति मा। हामी थप विवरण यी प्रत्येक विचार गर्नुहोस्।
को कसरी सरल जटिल वाक्य? उदाहरण यस लेखमा प्रस्तुत छ।
तपाईं कुनै पनि प्रस्ताव, त्यसपछि यो आदर्श homogeneous सर्तहरू जटिल गर्न आवश्यक छ भने। सामान्यतया, यो अवधि जो एउटै प्रश्न प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र पनि एउटै शब्द संग सम्बन्धित lexical एकाइहरु को सम्बन्ध मा प्रयोग गरिन्छ। यो यस्तो छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ भएको वाक्य सदस्यहरू सामान्यतया अल्पविराम द्वारा छुट्टयाएर छन् (दोश्रो देखि)। यहाँ एक ज्वलन्त उदाहरण हो: "उहाँले मास्को र ओरेनबर्ग र ऊफा मा एउटा लेख लागि जानकारी भेला छ।"
यो जटिल प्रस्ताव (साधारण), तल प्रस्तुत गरिएको छ जो: "सडक, टाइल लाइन, को जंगल मा भयो।" यो परिभाषा द्वारा जटिल छ। यो एक माध्यमिक सदस्य हो, कुनै पनि वस्तु denoting हस्ताक्षर र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ: "के?", "के?", "कसको?" यस मामला मा, छुट्टै परिभाषा। यी अभिव्यक्ति निर्भर शब्दहरू र तिनीहरूलाई बिना विशेषण वा सर्वनाम साथै वा तस्करी participle र (शायद) अंक संलग्न हुन सक्छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
यहाँ एक ज्वलन्त उदाहरण हो:
"प्रकृति एक लजालु र भद्र गरेर, उहाँले सधैं आफ्नो गुण संग नाराज थियो।" यो सर्वनाम बुझाउँछ एउटा छुट्टै परिभाषा छ।
"चिसो रात देखि एक चाँदी बक्स मा फूल फिक्का।" यो अलग परिभाषा।
कसरी यो अलग एक सरल वाक्य द्वारा जटिल छ खडा? यो उदाहरण vyshepredstavlennyh देखि देख्न सकिन्छ। एक अल्पविराम निम्न lexical एकाइ द्वारा परिभाषित वा व्यक्तिगत सर्वनाम उल्लेख छन् भनेर परिभाषा गर्न विनियोजन गर्नुपर्छ।
सरल जटिल वाक्य (विषयमा ज्ञान परीक्षण अक्सर सैद्धान्तिक भाग पछि दिइएको छ) एउटा अनुप्रयोग समावेश हुन सक्छ, एक संज्ञा व्यक्त गरेका परिभाषा छ। नियम, यो एक पूर्ण फरक नाम, विशिष्ट चयन वस्तु characterizes जो दिन्छ। यहाँ केही उदाहरणात्मक उदाहरणहरू छन्:
"फ्रस्ट-राज्यपाल आफ्नो सबै सम्पत्ति bypasses।"
"यहाँ उनि व्याख्या हो।"
"तिमी, initiator रूपमा, एक प्रमुख भूमिका खेल्ने बाध्य छ।"
"शक्तिशाली जनावर, आँधी क्षेत्रहरू, आफ्नो शक्ति गुमायो।"
"- पुस्तकहरु भण्डारण cubby अर्को छ।"
आवेदन विराम सरल जटिल वाक्य:
व्यक्तिगत सर्वनाम अरुबाट अलग राख्नु;
संघ "कसरी" संग आवेदन अरुबाट अलग राख्नु;
परिभाषित शब्द पालना कि साधारण आवेदन अरुबाट अलग राख्नु;
अनुप्रयोग वाक्यको धेरै अन्त मा स्थित छ यदि अल्पविराम, एक ड्यास द्वारा बदलिएको छ।
पूरक कुनै पनि वस्तु वा उत्तर प्रश्न अप्रत्यक्ष अवस्थामा designating, को वाक्यको एक सानो भाग भनिन्छ। , यस्तो गति अरुबाट अलग राख्नु तिनीहरूले निम्न शब्दहरू :. साथै समावेश भने, बाहेक, अधिक र माथि, सहित अपवाद संग स्पष्टताको लागि बाहेक, बरु, आदि बाहेक, हामी एउटा उदाहरण दिन:
"त्यो वर्षा को ध्वनि तर केहि सुनिन।"
"म साँच्चै केही विवरण लागि बाहेक, लेख मन पर्यो।"
परिस्थितिमा समय, स्थान, तरिका र कार्य को कारण संकेत, यो वाक्यको एक सानो भाग भनिन्छ, र प्रश्नको जवाफ "जब?", "कहाँ?" "किन?", "कसरी?" यहाँ एउटा उदाहरण छ:
"मित्र देखेर पछि, साशा एक लामो समय को लागि मौन उभिएर।"
"त्यो निदाउनु, हँसिलो।"
"को फिक्का अनुहार तापनि त्यो आकर्षक थियो।"
तिनीहरूले एक gerund वा व्यक्त यदि परिस्थिति सधैं छुट्टयाएर छन् उल्लेख गर्नुपर्छ मौखिक participle वाक्यांश, र उत्तेजित गर्दछ "+ संज्ञा बाबजुद"।
परिचयात्मक डिजाइन र ह्यान्डलिङ
जटिल सरल वाक्य - यो जो शब्दहरू संयोजन (अपील) कसलाई वा जो विशिष्ट बोली संकेत गर्न व्यक्ति वा कुरा भनिन्छ छ एउटा प्रस्ताव छ। साथै, यसको सट्टा उपचार को प्रयोग र डिजाइन इनपुट गर्न सकिन्छ। यो शब्द, वा जो द्वारा बोल्ने व्यक्ति एक कथन सामग्री तिर एक आत्मपुरक मनोवृत्ति व्यक्त पुरा वाक्य संयोजन, (जस्तै, छैन / विश्वास, विचार को आदेश, को बयान को स्रोत को भावना त्यसैले अभिव्यक्ति, तरिका र।)।
यो उपचार सधैं अल्पविराम द्वारा खडा भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। इनपुट संरचना लागि जाँदा, तिनीहरूले एक ड्यास वा कोष्ठकमा प्रयोग अलग खडा गर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्टताको लागि, हामी केही उदाहरण दिन:
"एक दिन - को कन्सर्ट थियो - म किन सम्झना छैन।"
"जाडो चिसो जस्तो देखिन्छ।"
"अमेरिकी चलचित्र को सार (तपाईंले देख्नुभएको छ भने) केही monotonous।"
"हे मरियम, तपाईं कति सुन्दर छन्।"
यस वाक्य प्रस्ट्याउने
Refines अन्य व्याख्या गर्ने वाक्य भनिन्छ। यो अक्सर समय र स्थानको अवस्था प्रस्ट्याउने छन् उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै, यस्तो प्रस्ताव सदस्यहरु को भूमिका कहिलेकाहीं कार्य र अठोट।
"द वर्षा आठ बजे मा, साँझ थाले।"
"अघि, सडक धेरै छेउमा, एक ठूलो आगो जल थियो।"
क्वालिफाइङ सदस्य सधैं अल्पविरामद्वारा विभाजित गरेर छन्।
एक सरल जटिल वाक्य कसरी परिभाषित गर्न
के तपाईं एउटा सरल जटिल वाक्य फेला पार्न आवश्यक छ, जो एक काम मार्फत आए भने शायद तपाईं निम्न अल्गोरिदम मदत गर्न सक्छ:
ती सबै वाक्य कुनै विराम छ जहाँ हटाउनु।
आधार हाइलाइट र कहाँ जग द्वारा प्रत्येक अन्य देखि विराम विभाजित छ ती प्रस्ताव हटाउनु।
सम्बन्ध बाँकी प्रस्ताव तिनीहरूले विराम केही फारम किन पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुपर्छ (खुल्ने शब्दहरू, homogeneous सर्तहरू, adverbial participles वा participial र यति मा।)।
Archaisms, historicism, neologisms: परिभाषा, रूसी भाषा प्रयोग को उदाहरण
"द जुङ्गा झटका छैन": phraseologism मूल्य, अर्थ, र उपयोग उदाहरणहरु। सबै राम्रो काम गर्दैन
लन्डन बारेमा सबैभन्दा रोचक तथ्य
Fraer - यो हुनुहुन्छ? शब्द को अर्थ र मूल
बच्चा सम्भालना र घरेलू कर्मचारी जाँच
को limelight फिर्ता धमाका साथ गोरा
टर्की, Marmaris Resort मा बीच बिदा